အယ်ဖိုး: ကွန်ပြူတာအားလုံးအတွက်..2010 Driver Pack For window7, vista , xp --Both 32 bit and 64 bit
ကွန်ပြူတာအားလုံးအတွက်..2010 Driver Pack For window7, vista , xp --Both 32 bit and 64 bit
ဒီDriverPack Solution 2010 က Latest version ပါပဲ...
32 bit ရော 64 bit ရော..ကွန်ပြူတာအကုန်လုံးမှာ လိုအပ်တဲ့Drivers တွေကို. Automatically...Install လုပ်ပေးပါတယ်..
Outdated ဖြစ်နေတဲ့ Driver တွေကိုလည်း update လုပ်ပေးပါတယ်..
Rar File 22 ခုရှိပါတယ်.. စုစုပေါင်း >> 3.09 G
Rar ကို extract လုပ်လိုက်ရင် >>> 3.17 G ရပါတယ်
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ File တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
Run Driver Suite 2010 ကို Double Click လိုက်တာနဲ့..လိုအပ်တဲ့ Driver တွေ.Outdated Drivers တွေရဲ့ information တွေကိုပြပါလိမ့်မယ်..
င်္Free Download From MediaFire
Free Download From Ifile.it
Posted by Peace at 10:23 AM
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာပြည်ကနေ youtube ဆိုက်ကို ကြည့်ခွင့်မပေးထားပါဘူး . ပိတ်ထားပါတယ် . မနေ့က ညီလေးတစ်ယောက် မြန်မာပြည်ကနေ youtube movie...
ပျောက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ ပြန်ရဖို့
ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်ကလေး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်သွားလို့ ဖိုင်တွေ အားလုံး ပျောက်သွားသလား။ မှားပြီး ဖော်မတ်လုပ်မိလို့ ဖိုင်တွေပျောက်သွားသလား။ စိတ်...
Desktop ကို အလှဆင်
Desktop မြင်ကွင်းကို တစ်မူထူးခြားပြီ လှပတဲ့ Real Desktop Software ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Run ထားတဲ့အချိန်မှာ အပေါ်က မြင်...
Photoshop Cs5အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုတော့ အားလုံးလိုလို စိတ်ပါဝင်စား ရှိကြပါတယ် .. တစ်ချို့ကလည်း လုပ်ငန်း ပိုင်းအတွက် အသုံးဝင်သလိ...